मंगलबार, असार २१, २०७९ ०८:५९:५२ युनिकोड
आज ३ अप्रिल: विश्वमा आजको दिन कहाँ के भयो ? हेर्नुहोस ५ घटना आइतबार, चैत २०, २०७८
विश्वमा आजको दिन कहाँ के भयो ? हेर्नुहोस ५ घटना शनिबार, चैत १९, २०७८
विश्व इतिहासमा आजः पहिलो इस्लामिक गणतन्त्रदेखि फुटबल लिगको पहिलो बैठक बुधबार, चैत ९, २०७८
११ वर्षीय युक्रेनी बालक जो १४ सय किलोमिटर एक्लै हिडेर स्लोभाकिया पुगे युक्रेनमा रुसी युद्धमाझ एक ११ वर्षीय युक्रेनी बालक एक्लै १ हजार ४ सय किलोमिटर यात्रा गरेर छिमेकी स्लोभाकिया पुगेका छन् । आमाको नोट र आफ्नो हातमा टेलिफोन नम्बर लेखेर ती बालक एक्लै त्यति लामो दूरी पार गरेका हुन् । आफूसँगै उनले एउटा झोला पनि बोकेका थिए । बिहीबार, चैत ३, २०७८
बिश्व इतिहासमा आज : भियतनाम युद्ध देखि इराकद्वारा रसायनिक हमला सन् १९८० देखि इराक–इरान युद्ध चलिरहेको थियो । यसमा हजारौँ मानिस मारिएका थिए । तर १६ मार्च १९८८ मा जे भयो, त्यो इतिहासकै सबैभन्दा क्रूर घटना बन्यो । बिहान करिब ११ बजे इराकी सेनाले इरानसँग सीमा जोडिएको सहर हेलबजामा रासायनिक हमला गरेको थियो । सेनाले मस्टर्ड ग्यास हावामा मिसाएको थियो । बुधबार, चैत २, २०७८
नाक मात्र ढाक्ने ‘कोस्क’ नामको अनौठो मास्क चलनमा दक्षिण कोरियामा पछिल्लो पटक अनौठो मास्क चलनमा आएको छ, जुन परम्परागत फेस मास्कभन्दा बिलकुल फरक छ । पछिल्लो समयमा प्रचलनमा आएको मास्कले नाक र मुखकोसट्टा नाक मात्र ढाक्छ । नयाँ मास्कलाई कोस्क नाम दिइएको छ । ‘को’ र मास्कलाई जोडेर कोस्क नाम दिइएको हो । कोरियाली भाषामा कोको अर्थ नाक भन्ने बुझिन्छ । दक्षिण कोरियाली कम्पनी अटमानले बिक्री गरेको सो अस्वभाविक मास्कमा लगाउने मानिसको मुख नढाक्ने गरी बनाइएको छ । शनिबार, फागुन ७, २०७८
बाबु अन्तरिक्षमा पाइला हालेको ६० वर्षपछि छोरीले पनि गरिन् अन्तरिक्ष यात्रा अमेरिकाका प्रथम अन्तरिक्षयात्री एलन शेपर्डकी छोरीले आफ्ना बाबुको मार्ग पछ्याउँदै अन्तरिक्षमा पुगेकी छन् । बाबु अन्तरिक्षमा पाइला हालेको ६० वर्षपछि छोरी लौरा शेपर्ड अन्य पाँच यात्रुसहित अन्तरिक्ष यात्रा तय गरेकी हुन् । लौरा अहिले ७४ वर्षकी भइन् । सोमबार, मंसिर २७, २०७८
विश्व इतिहासमा आजः बेलायतबाट केन्या स्वतन्त्रदेखि इटालीको बैंकमा बिस्फोट आज विश्व इतिहासमा विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भएका थिए । प्रस्तुत छ विश्व इतिहासमा आज भएका केही सामाजिक तथा राजनीतिक घटनाक्रम आइतबार, मंसिर २६, २०७८
विवाहको दिन अत्याधिक रुँदा दुलहीको मृत्यु नेपाल लगायत केही देशमा विषेशगरी दुलही वा छोरीलाई विदाई गर्ने क्रममा रुवाबासी हुने गर्छ । छोरीलाई पराइघर पठाउने बेलामा माइती पक्ष धुरुधुरु रुने अझै पनि चलन छ । तर, भारतको ओडिसामा भने रुने मात्र होइन विवाहको दिनमा बेहुलीको रुदाँ रुदै मृत्यु समेत भएको छ । भारतीय समाचार अनुसार यो घटना ओडिसाको सोनपुरको हो । मुरली साहुको छोरीको बलांगीर जिल्लाको टेटलगांव निवासी बिसीकेसनको साथमा विवाह भइरहेको थियो । विवाहको सम्पुर्ण कार्यक्रम हुँदै गएर विदाईको समय भएको थियो । बुधबार, असार १६, २०७८
लकडाउनका बीच प्लेन चार्टर गरेर एक सय ७० जना साक्षी राखी प्लेनभित्रै विवाह कोरोनाले अत्याधिक प्रभावित छिमेकी देश भारतमा लकडाउनको बीच प्लेन चार्टर गरी प्लेनभित्रै विवाह गरिएको छ । एक सय ७० जना आफन्त तथा साथीलाई बोलाएर एक जोडीले उडिरहेको प्लेनभित्रै विवाह गरेका हुन् । लकडाउनकाबीच भएको यो घटनाले छानबिन सुरु भएको छ । घटना बैगालोरको हो । मिनाक्षी अमन मन्दिरबाट मधुराईका लागि स्पाइजेटको विमान चार्टर गरिएको हो । विमानभित्र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरिएको विषयमा विमानका कर्मचारीमाथि कारबाहीको तयारी भइरहेको छ । मंगलबार, जेठ ११, २०७८
रोचक प्रसङ्ग : जहाँ कर्ल गर्लले जाँच्छन् कोरोना कोरोना भाइरसको सामना गर्नका लागि समाजका सम्पूर्ण मानिसले आ–आफ्नो स्तरमा संघर्ष गरिरहेका छन् । जर्मनीमा एउटा त्यस्तो एउटा कुरा भएको छ, जुन सबैलाई अनौठो लाग्नेछ । त्यहाँको एउटा वेश्यालयलाई कोरोना परीक्षण गर्ने ठाउँ बनाइएको छ भने त्यहाँ काम गर्ने महिला ९वेश्या०हरु पनि सक्रिय भएका छन् । उक्त वेश्यालय दक्षिण–पश्चिमी जर्मनीमा हाइडलबर्ग नामक शहरमा रहेको छ । उक्त वेश्यालयको नाम बिहीभ लभ सेन्टर रहेको छ, जहाँ २५ जना महिलाहरु काम गर्छन् । बुधबार, वैशाख २९, २०७८